Kali ah 🥇 Gali oo ku raaxee Emulator.Online
Lonely waa a ciyaarta turubka hal qof. Maaddaama ciyaarta kaligeed la ciyaarayo, ujeeddada ugu weyni ma aha in la garaaco qof kaa soo horjeeda, laakiin waa in la xalliyo ciyaarta, la tababaro fikirkaaga macquul ah, mararka qaarkoodna xitaa waxaa loo isticmaalaa fikirka.
Kali keli: Sidee talaabo talaabo loogu ciyaaraa? 🙂
Si loo sameeyo a Lonely khadka tooska ah ee bilaashka ah, waa inaad sameysaa raac tilmaamahan talaabo talaabo ah:
Tallaabada 1. Fur biraawsarkaaga aad doorbidayso oo aad tagto bogga ciyaarta Emulator.online
Tallaabada 2. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad garaac ciyaarta oo waxaad bilaabi kartaa inaad doorato kalidii aad jeceshahay inta badan. Waad dooran kartaa dhibaatada ku habboon heerkaaga ciyaarta.
Ka dib markii aad dooratayWaxa kale oo aad dooran kartaa tirada gogo 'ee xujada ay yeelan doonto.
Tallaabada 3. Waa kuwan badhamno waxtar leh. Karaa "Ku dar ama ka saar codka", Sii badhanka"Play"Oo bilow ciyaarta, waad awoodaa"Hakad"iyo"Dib u Bilow"wakhti kasta.
Tallaabada 4. Hel si aad u baabi'iso dhammaan kaararka ciyaarta ilaa Win. Tan awgeed waa inaad kaararkaas dhigataa dhowr kaar oo kaararka ahMidab isku mid ah iyo si nidaamsan.
Tallaabada 5. Kadib markaad dhamaysato ciyaar, guji "Dib u bilow" Si aad u sameysato cid kale
Waa maxay Kalidaa? ????
Lonely (sidoo kale loo yaqaan kalidaa ama kalidaa Faransiis) waa ciyaar kaararka loogu talagalay hal qof. Tarjumaadda ka timid Faransiiska waxay si fiican u muujineysaa waxa ku saabsan. Tarjumay, waxaa loola jeedaa "Dulqaad". Noocyo kala geddisan ayaa loo isticmaali karaa in lagu ciyaaro kelidii, labadaba mallet Spanish sida turubka.
Waxaa jira noocyo kala duwan kalidaa ee noo ogolaaneysa inaan yeelano talooyin badan oo aan ku baashaalno.
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee guushiisu waxay ku saleysan tahay suurtagalnimada in la ciyaaro hal qof, oo aan la tartamin. In laga dhigo ciyaar kaamil ah oo lagu nasto oo lagu fekero.
Sheeko keli ah 🤓
Kalinimadu waa a magaca noocyada kala duwan ee ciyaaraha kaararka. Ciyaarta ugu caansan ee dhexdooda waxaa loo yaqaan "Cilmiga caadiga ahAsalka saxda ah ee ciyaarta lama garanayo, laakiin isku habeynta kaararka waxay ka imaanayaan kaararka tarotka ee loo adeegsan jiray sixirka. Dhamaadkii qarnigii XNUMXaad, ciyaarta waxaa lagu xusay markii ugu horeysay Waqooyiga Yurub, ciyaartuna u qaadatay Faransiiska horraantii qarnigii XNUMXaad.
Napoleon Bonaparte ayaa lagu soo waramayaa inuu si isdaba joog ah u ciyaaray kaligiis markii uu u haajiray Saint Helena sanadkii 1816. Sanadihii xigay, ciyaartu waxay noqotay madadaalo caan ka ah Faransiiska ugu dambayntiina waxay qabsatay adduunka intiisa kale, oo ay ku jirto Jarmalka. Erayo badan oo keli ah (tusaale ahaan, "sanduuq") waxay ka yimaadaan Faransiiska.
Xitaa maanta, ciyaartan caanka ah weli waa hiwaayad caan ku ah dad badan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa mid dusha kaararka, dusha toosan, iyo xoogaa xeerar fudud. Marka ficil ahaan qof walba wuu ciyaari karaa ciyaartan.
Kalinimada ayaa ah qaab aan dhib badnayn oo madadaalo ah laga soo bilaabo xilli dadku weli waqti haysteen oo adduunku uusan weli ku jirin deg-deg sidan oo kale ah. Dhib malahan hadaad u ciyaarto sida caadiga ah (gacanta) ama kumbuyuutarka ugu dambeeya - waa nasataa oo maskaxdaada tabobartaa waana caan ka tahay maanta sidii hore!
Taariikhda ciyaaraha kelida ee kombiyuutarka
Kadib markii kombiyuutarkii ugu horreeyay laga helay suuqa, waxay ahayd uun tallaabo macquul ah in lagu ciyaaro nooc dijitaal ah oo kaligiis ah. Maaddaama kaararka lagu ciyaaro shaashadda ay u baahan tahay xad xoog xisaabinta, tiro badan oo ciyaaro ah ayaa soo muuqday muddo gaaban. Maalmihii MS-DOS, cayaaraha badankood waxay ku saleysnaayeen qoraal waxaana loogu talagalay hal cayaaryahan kaliya.
Si kastaba ha noqotee, kumbuyuutarradu waxay noqdeen kuwo dhakhso badan oo casri ah, taas oo hagaajinaysa fursadaha garaafka ee ciyaaraha. Awoodda xusuusta ee la kordhiyay ayaa sidoo kale u oggolaatay barnaamijyahannada inay ku habboonaan ciyaaro badan oo hal barnaamij ah. Tani waa sida loo abuuray dhammaan aruurinta cayaaraha kelida ah.
Ururinta ganacsi ee ugu horreysay waxay ahayd "Solitaire royaleWaxaa qoray Brad Fregger oo waxaa sii daayay Spectrum Holobyte sanadkii 1987. Cayaartu waxay ku haboonayd labada PC (MS-DOS) iyo Macintosh. Waxay kakoobanayd sideed nooc oo kaladuwan, waxay lasocotay 16 midab oo sawiro EGA ah, jiirkuna wuu shaqeeyay.
Dhowr sano kadib, sanadkii 1992, QQP (Soosaarida Tayada Quantum) waxay bilaabeen aruurin ballaaran oo loo yaqaan "Safarka Kali-socodka ahCiyaartan ayaa sidoo kale loo sii daayay MS-DOS waxaana ku jiray tirada wareerka ee 105 noocyada kala duwan ee ciyaarta ah, iyo sidoo kale tirakoob faahfaahsan oo loogu talagalay ciyaar kasta! Ciyaartoydu waxay dooran karaan ciyaaro qaar mana abaabuli karaan safarradooda oo keliya (safarada), laakiin sidoo kale kaqeybgal ergooyinka (shaqooyinka) oo aad ku kasbato dhibco dheeri ah ka dib markii aad ku guuleysatay dhowr wareeg.
Microsoft Windows Solitaire Waxay marki ugu horaysay ka soo muuqatay Windows 3.0 sanadkii 1990. 1995, Windows 95 waxay soo saartay ciyaartii Freecell. Freecell wuxuu noqday mid aad caan u ah waqti aan badnayn, waxaana soo muuqday nuucyo badan oo ah noocyada kale ee shareware ee ciyaarta. Ugu dambeyntii, Solitaire ayaa ka soo muuqday Microsoft XP Spider, oo ay ku xigto garaacis cusub iyo noocyo la hagaajiyay.
Maanta, ciyaaro ayaa loo heli karaa madal kasta oo la maleyn karo, oo ay ku jiraan kiniiniyada iyo taleefannada gacanta. Meel kasta oo aad joogtid, had iyo jeer waxaa jira noocyo kalidaa oo loo heli karo nasasho iyo raaxo!
Sida loogu ciyaaro kalidaa: Talooyin ️ ♠ ️ ♣ ️
Talo 1: Marka hore la shaqee kaararka kelida ah ee hoose
Solo, waa inaad hubaal isticmaashaa kaararka soo socda, maxaa yeelay xirmooyinkaani waxay u baahan yihiin in marka hore la faaruqiyo.
Eeg inaad isku dhejin kartid kaararka soo socda. Haddii aad dhaqaajin kartid kaarar badan hal mar, waa inaad u isticmaashaa tuubada kaararka ugu yar hage ahaan.. Sidan waxaad kuheleysaa kursi dhaqso badan oo hoosta ah.
Kadib waxaad si dhakhso leh u buuxin kartaa meelaha banaan mar labaad. Kaliya banaanka soo dhig duubka kore markii aadan sameyn karin dhaqaaq hoose.
Talada 2: garsoore kasta waa inuu isla markiiba kici
Xusuusnow inaad dhaqaajiso aces isla markiiba.
Tani waxay si gaar ah run ugu tahay aces ku jira mid ka mid ah guntimaha hoose. Waxaad ku riixaysaa gacantaada mid ka mid ah meelaha banaan. Haddii kale, laba jeer-riix tiirarka.
Sidoo kale waa inaad isla markiiba u dhaqaajisaa aces dusha sare. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaad fursad u hesho inaad kaararka badan ka guurto mid ka mid ah safafka hoose.
Talada 3: waxaad dhigtaa Lone King meesha bannaan ee bilaashka ah
U shaqee baytariyada sida ugu fiican ee aad kari karto. Waxaad ubaahantahay cadeynta boqorrada.
Isla marka aan helo meel bannaan, waa inuu ka buuxiyo boqor. Ka dib isku xir dhammaan kaararka kale midba midka kale ka dib. Sidan ayaad gadaal u dhigi kartaa xarfaha.
Haddaad kala dooran kartid laba boqor, waa inaad fiiro gaar ah u lahaataa midabka aad ku buuxin karto kaararka badankood.
Isla sidaas oo kale ayaa lagu dabaqayaa laba barood oo bilaash ah. Xaqiiq ahaan tan ka buuxi boqorka madow iyo hal mar boqorka cas. Tani waxay kordhisaa suurtagalnimada in la ciyaari karo kaarar badan isla waqtigaas.
Talada 4: beddel kaararka
Haddii aadan dhaqdhaqaaq dambe sameyn karin ama haddii aysan wax macquul ah adiga kuugu muuqan, waa inaad beddesho.
Fiiri kaararka oo kala beddel dhexdooda si aad kaadhadhka qaarkood kor u saarto.
Isbeddelku waa muhiim oo badiyaa waa habka kaliya ee ciyaarta lagu xakameeyo.
Haddii aadan arkin tareenno dheeri ah, dhagsii sheyga "Soo jeedin"menu-ka. Ciyaaraha qaarkood waxaad sidoo kale riixi kartaa" T "ee kumbuyuutarka ciyaartana waxay ku tusin doontaa waxa dhaqdhaqaaqa ee suurtogalka ah.
Noocyada Kalinimada 🃏
Waxaa jira kala duwanaansho kalidii ah, taas oo u baahan in ka badan hal sagxad iyo heerar xirfadeed oo kala duwan oo ka socda ciyaaryahanka. Liiska hoos ku qoran wuxuu daboolayaa noocyo kala duwan oo kali ah, laga bilaabo Klondike-ka caadiga ah iyo Spider-ka ilaa ciyaaraha u baahan xawaaraha ama, gabdhaha, ciyaar ay tahay inaad weydiisato kaararka oo aad u labisto moodal walba.
Nooca caadiga ah! Ka dalbo kaararka Ace-ka King, u kala saar iyaga oo ku habboon. Si tan loo sameeyo, u kala saar kaararka cutubyo isdaba socda, had iyo jeerna ku kala beddel kaararka casaanka iyo madow, illaa inta sagxadda oo dhami ka muuqanayso. Markaad ogaato ace, ku faafi shaashadda dusheeda oo dul dhig kaararka kale ee isku midka ah dusha.
Wax yar oo ka duwan kii hore, kaligiis waa inaad abaabushaa kaararka laga bilaabo Boqorka ilaa Ace. Sidoo kale, waxaad leedahay hal suudh oo keliya miiska, si kastaba ha ahaatee kaararka ayaa lagu celcelin doonaa dhowr jeer, oo kuu oggolaanaya inaad sameyso wax ka badan hal isku xigxig oo amar ah.
Kali Ah Ahraamta
Ujeedada ciyaartan ayaa ahs ka saar dhammaan Ahraamta kaararka, iyaga oo u dhigma laba-labo marka la isku daro illaa saddex iyo toban si looga saaro shaashadda. Kaararka ka sokow ee lagu dhejiyay Ahraamta, waxaad haysataa saddex kaar oo dheeri ah oo ay tahay in loo isticmaalo baabi'inta kuwa kale oo laga sii daayo kaararka hoose ee hoose, oo lagu daray boos dheeri ah oo lagu kala saaro mid kaararka ah.
Dariiqa waxaa loo turjumi karaa "dariiqa" waxayna ku soo koobeysaa ujeedada iyo makaanikada cayaarta si wanaagsan. Waa inaad abuurtaa dariiqyada kaararka, ku soo biir iyaga iyadoo loo eegayo lambar kasta oo weji ah, kor u kaca ama u degaya siday u kala horreeyaan. Kaadh kasta wuxuu ku xidhan karaa oo keliya ka hor ama ka hor ama mid ka mid ah kaftanka.
Halkan kaararka waa inaad labo u dhigtaa oo isu geyn noqonaya saddex iyo toban, sida Solitaire-ka Ahraamta. Markii aad kaararka ka saarto dusha sare ee rukunka, kaararka ku xiga ayaa la rogi doonaa, iyadoo la furayo fursado cusub oo lagu biiriyo afarta kaar ee aad gacanta ku hayso.
Xawaaruhu waa waxa lagu xisaabtamo, ugu yaraan kulankaan. Ka soo horjeedka kumbuyuutarka, waa inaad deg degtaa oo aad kaararka oo dhan ka saartaa salkaaga. Si tan loo sameeyo, ku dheji kaararkaaga mid ka mid ah labada xirmo ee ku yaal bartamaha shaashadda, sida ku cad lambarka kaarka ee xagga hoose, waa inuu ka sarnaadaa kaliya hal lambar oo ka hooseeya kaarka miiska saaran.
Ciyaar kale oo ka hadlaysa ciribtirka kaararka iyadoo loo eegayo lambar kasta. Farqiga ayaa ah waa inaad ka saartaa kaararka si aad uga xoreyso qalcadda seddex munaaradood oo hoose, had iyo jeer u fiirsashada qiimaha kaarka la iftiimiyay ee shaashadda hoose.
Samir iyo mood wada, ciyaar aad u xiiso badan. Waa inaad baabi'isaa dhammaan kaararka ku yaal shaashadda isla waqtigaas oo aad labbisto moodel kasta. Si aad u ururiso kaararka xagga hoose, waxaad isugu gaysaa kaararka leh nooc isku mid ah, marka lagu daro xisaabta: qaar ka mid ah moodooyinka ayaa leh doorbidyo midabbo, daabacado iyo qaabab.
Shaki la'aan, kan ugu xiisaha badan dhammaantood. Waa inaad kaararka ka saartaa shaashadda iskudarka Mahjong iyo xusuusta ciyaarta- U kala dhig labo labo si aad u rogto kaararka salka ku haya iyo, si aad u furto kaararka leh qufulka, ka raadi kaararka oo leh fure la soo jiiday.